Tamin’ny 09 ora sy sasany maraina katroka no niainga teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidina Airbus 340 nitondra azy izay an’ny kaompania ana habakabaka malagasy Air Madagascar. Raha tsiahivina kely dia tany amin’ny Nosy rahavavy Maorisy no namaranan’i Papa Fransoa tanteraka ny fitsidihana Apostolika faha-31 nataony. Afak’omaly izy no nitarika lamesa lehibe tany an-toerana, izay natao tao Port Louis, ary niverina teto Madagasikara tamin’io ihany. Tsara ny manamarika fa firenena miisa 49 hatreto no notsidihin’i Papa hatramin’ny 2013 nahateo amin’ny fipetrahana masina azy. Isika eto Madagasikara no faha-48 tamin’izany tao anatin’ity fitsidihana Apostolika faha-31 ity. Maro moa ireo olona nitanjozotra vao maraina nanamorona ny lalana nizorany niala teny amin’ny Nonciature Ivandry, nandalo ny lalam-baovao Tsarasaotra nihazo ny seranam-piaramanidina Ivato, omaly.